China Aluminium Intonga yoMvelisi kunye noMthengisi | UKunda
Uluhlu lwesicelo: izixhobo zokudlulisa amandla (ezinje ngee-racks zemithwalo yemoto, iingcango, iifestile, imizimba yemoto, amaphiko obushushu, amaqokobhe egumbi). Iimpawu: amandla aphakathi, nokumelana elungileyo, ukusebenza kakuhle iwelding, inkqubo elungileyo yokusebenza (kulula ukuba extruded), igcwala elungileyo kunye nokusebenza imibala.
Uluhlu lwesicelo: izixhobo zokudlulisa amandla (ezinje ngee-racks zempahla, iingcango, iifestile, imizimba yeemoto, amaphiko obushushu, iigobolondo zecandelo).
I-1000 yeerumini yeeruminiyamu yeentonga yeyoluhlu olunowona mxholo wealuminium phakathi kwawo onke la manqaku. Ubunyulu bunokufikelela ngaphezulu kwe-99.00%.
2000 uthotho aluminiyam iintonga. Ubonakala ngobulukhuni obuphezulu, kunye nomxholo ophezulu wobhedu, omalunga ne-3-5%. Iingcingo zealuminium zothotho ezingama-2000 zizinto ezenziwe ngealuminium, ezingasetyenziswa rhoqo kumashishini aqhelekileyo.
I-3000 yealuminium intonga yenziwe ngamanganese njengeyona nto iphambili. Uthotho kunye nomsebenzi ongcono wokulwa nerusi.
Iindonga ezingama-4000 zealuminium zezinto zokwakha, izinto ezenziwa ngoomatshini, izinto zokwenza izinto, izinto zentsimbi; Indawo yokunyibilika ephantsi, ukumelana nokulungela ukubola, ukumelana nobushushu kunye nokumelana nokunxiba
Iindidi ezingama-5000 zeentonga zealuminium zinokubizwa ngokuba ziialuminium-magnesium alloys. Ezona mpawu ziphambili luxinano oluphantsi, amandla aphezulu eqine kunye nobude obuphezulu.
Iingcingo zealuminium ezingama-6000. Iqukethe ikakhulu izinto ezimbini zemagniziyam kunye nesilicon, efanelekileyo kwizicelo ezineemfuno eziphezulu zokumelana nokubola kunye ne-oxidation.
Iindonga zealuminium ezingama-7000 ikakhulu ziqukethe i-zinc. Ikwangoluchungechunge lwenqwelo moya. I-aluminium-magnesium-zinc-copper alloy, i-alloy-treatable alloy, kunye ne-alloyum ephezulu kakhulu ene-wearable resistance.
Iintonga zealuminium ezingama-8000 zisetyenziselwa ifoyile yealuminium, kwaye iintonga zealuminium azisetyenziswa kakhulu kwimveliso.
Egqithileyo Qhuba uLawulo
Okulandelayo: Plate yokukhokela